Sida loo xidid Android leh Master Root aan PC | Androidsis
Sida loo xidido Android
Eder Ferreño | | Xididka Android, Khiyaamada Android, Tababarada
In kasta oo nidaamka hawlgalka ee Android uu na siinayo xorriyad ku filan oo aan wax walba ku qaban karno, haddana waxaan had iyo jeer ka heli karnaa xaddidaadyada qaarkood. Xuduudahaani waa laga saari karaa haddii aan helno marin-u-hel isticmaale-weyn ama, sida loogu yaqaanno Android, Root. Laakiin, Sida loo rujin Android?
Qaar badan oo ka mid ah qalabka na siiya suurtagalnimada in la soo afjaro qalabkeenna Android ayaa loogu talagalay kumbuyuutarrada, laakiin sidoo kale waxaa jira codsiyo noo oggolaanaya inaan helno Xidid ka casriga ah ama kiniin.
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan sharxno qayb ka mid ah waxa la xiriira xididnimada iyo Xidid Android. Waxaan wax yar ka sharixi doonnaa waxa loo yaqaan 'Root' oo loogu talagalay waxaan ka hadli doonaa barnaamijyada qaar ee ku xidid qalabkayaga, labadaba qalabka nagu qasbaya inaan isticmaalno kombuyuutarka, sida Root Master, iyo kuwa kale oo noo oggolaan doona inaan qabanno hawsha la'aanteed waa
1 Waa maxay isticmaalka noqoshada isticmaale xidid ku ah Android?
2 Barnaamijyada ugufiican ee lagu xidido Android
3 Sida loo xidid Android leh Master Root
4 Sida loo ogaado haddii aan xidid ahay iyo in kale
5 Kawaran hadaanan xidid ahayn
6 Ma khatar baa in xididada moobiilka?
7 Ma damaanad qaadkii xididnimadiisa ayaa la baabi'iyey?
8 Maxaan sameeyaa haddii kadib xididka android aanan cusbooneysiin karin?
9 Talooyin in maskaxda lagu hayo ka hor soo afjarno
10 Sideen uga saaraa xididka
Waa maxay isticmaalka noqoshada isticmaale xidid ku ah Android?
Sidii aan horeyba u soo sheegay, in kasta oo Android aan xor u nahay inaan ficil ahaan wax ku qabanno, had iyo jeer waxaan leenahay xaddid. Nidaamka hawlgalka ee ku saleysan Linux, si aan u fulino ficilada qaarkood waxaan u baahan doonaa inaan helno a ogolaansho gaar ah. Tusaale ahaan, arjiga Cerberus taas oo u adeegta in lagu xakameeyo aaladdayada meel fog haddii ay dhacdo xatooyo, waxay shaqeyn karaan oo keliya haddii qalabku xididaysan yahay. Sida kiiskii Cerberus, haddii aan dooneyno inaan adeegsanno dhammaan howlaha suuragalka ah, si kasta oo ay khatar u tahay, aaladda Android, waxaan u baahan doonaa inaan xididno.
Ahaanshaha xidid ayaan sidoo kale awoodnaa:
Ka saar lakabka shakhsi ahaaneed astaanta.
Ka saar barnaamijyada horay loo rakibay (bloatware).
Hagaajinta xawaaraha nidaamka.
Dheeraad ah shakhsiyeeyo aaladda.
Samee hawlgallada Wi-Fi ee aan la helin Root la'aan (sida soo kabashada ereyada sirta ah).
Samee nuqullo dhameystiran (adoo adeegsanaya aalado sida Titanium Backup).
Barnaamijyada ugufiican ee lagu xidido Android
Waxaa jira tobanaan ka mid ah codsiyada noo oggolaan doona inaan ka rujinno qalabkeenna Android, laakiin waxaan iftiimin lahaa waxyaabaha soo socda.
VRoot. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna isticmaalka badan waa VRoot. Sida barnaamijyada kale ee ugu wanaagsan ee lagu xidido aaladahayaga Android, waa mid aad u fudud in la isticmaalo, laakiin waxaa kaliya loogu heli karaa PC. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u adeegtaa inay dib u soo celiso oo u shaqeyso ku dhowaad nooc kasta oo Android ah (laga bilaabo 2.2 illaa noocyada ugu hadda jira).
Kingo xididka. Kani waa barnaamij wax ku ool ah sidii kii hore, laakiin VRoot ayaa la sheegay inuu leeyahay heer guul sare ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sameeyo jidka dib (oo loo yaqaan unroot) waxayna la shaqeysaa inta badan taleefannada Android iyo kiniiniyada.
FramaRoot. Sida codsi aan u baahnayn kumbuyuutar, kuma shaqeynayo aalado ama noocyo badan oo ah qalabkii hore, laakiin sidoo kale waa ikhtiyaar in la tixgeliyo. Gudaha CADADKA Waxaad haysataa qoraal sharxaya sida loo xidho aaladda Android Framaroot.
KingRoot. Codsi kale oo noo ogolaanaya inaan xididno qalabkayaga Android adigoon ku xirnayn PC. Bogooda internetka waxay yiraahdaan waxay ku shaqeysaa qalab gaaraya 103.790. Taada midkood ma ka mid noqon doontaa?
Xaqiiqdii mid ka mid ah barnaamijyadan, waxaad ku baran doontaa sida loo xidho moobilkaaga Android ama kiniinigaaga. Haddii aad rabto xididka SamsungBarnaamijyadani waxay sidoo kale la jaan qaadayaan taleefannada gacanta iyo kiniiniyada shirkadda Kuuriya.
Sida loo xidid Android leh Master Root
Kahor intaanan sharraxaad ka bixin Sida loo xidido Android leh Root Master, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso boostada Shakiga jira ee Android; Si aad u rujin ama aan u rujin? Taasi waa su’aasha Saaxiibkay Francisco wuxuu daabacay maalintiisa. Waxay ila muuqataa inay muhiim tahay inaan ka digo in la rujiyo qalabka Android, nooc ayaa diidi kara inuu dayactiro haddii aan dooneyno inaan isticmaalno dammaanaddiisa, in kastoo aysan ahayn tan ugu badan. Dhinaca kale, si la mid ah sida aan ugu helno dhammaan kaydinta qalabkeenna, waxaan sidoo kale u furaynaa albaab software xun Samee shaygaaga, illaa iyo inta aan socodsiino oo aan ku siino oggolaansho inaad sameyso (wax aan sameyn lahayn annaga oo aan ogeyn).
Haddii aad horey u aqrisay qoraalka kor ku xusan oo aad si cad uga muuqato, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah inaad isticmaasho Root Master waxaad u baahan tahay inaad haysato qalab ka mid ah Noocyada Android 1.5 iyo 5.x. Sidoo kale maskaxda ku hay in qaabkani kaliya lagula talinayo terminaalkaas aan haysan qalab gaar ah oo lagu xidido, sida Framaroot u Odin, kii labaadna Samsung. Haddii aad buuxiso shuruudaha, kuwan waa tallaabooyinka la raacayo:
Waxaan kala soo dagnay Root Master .apk CADADKA.
Haddii aynaan haysan rukhsaddaha lagu rakibo barnaamijyada laga helo ilo aan la garanayn oo karti leh, waanu karnaa.
Waxaan rakibnaa Root Master .apk.
Waxaan wadnaa dalabka. Waxaan arki doonaa shaashad sida tii ugu horreysay ee qabashada. Halkan uma baahnid inaan wax uun qabanno, iska sug inta ay tahay si loo hubiyo waafaqsanaanta qalabkeenna.
Haddii qalabkeennu la jaan qaadayo Root Master, waxaan arki doonnaa shaashad kale oo la mid ah tan shaashadda ku jirta oo aan ku arki doonno saddex badhan. Waa inaan taabannaa badhanka oranaya «Root».
Waxaan sugeynaa arjiga si loo falanqeeyo aaladda shaashad kale ayaa ka muuqata taas oo aan sidoo kale ku arki doonno ereyga "Root".
Waxaan ku ciyaarnay "Root."
Marka hawshu dhammaato, waxa hadhay oo keliya waa in la taabto badhanka guduudan waxaanan haysan doonnaa qalabkeenna xididaysan.
Laakiin hal shay oo kale ayaa dhiman: markaan dhammeyno Rooting aaladdayaga Root Master, waxaan arki doonnaa codsi cusub oo leh magaca SuperSu. Faa'iido darrada ayaa ah inay suurtagal tahay in codsigan uu ku jiro Shiinaha. Haddii dhibaatadu dhacdo, waxaa habboon in loo tago Google Play oo laga soo dejiyo SuperSu ama Superusuario Isbaanish.
Ikhtiyaar kale oo la mid ah oo noo oggolaanaya Afjarno Android oo aan ku xirnayn PC waa iRoot. Waa codsi ka casrisan kan Root Master waxaadna leedahay cashar qeexaya sida loogu isticmaalo boostadayada iRoot, Xidid badan oo ka mid ah terminals-ka Android oo aan u baahnayn PC. Intaas waxaa sii dheer, sida lagu sharaxay boostadaas, sameynta baaritaan ku saabsan Androidsis nooca "sida loo xididdeeyo" aaladda, iyada oo aan xigashooyinka la helin laguna beddelin "[qalab]" aaladda aan rabno in aan xidid ku dhigno, waxaad ka heli doontaa macluumaad xidid ahaan wax kasta oo qalab Android ah. Sidoo kale waad gujin kartaa CADADKA oo waxaad eegtaa qoraallada kala duwan ee aan qabaneynay sanadihii la soo dhaafay.
Miyaad ogtahay sida loo xidido android ma tan mise qaabab kale? Xor ayaad u tahay inaad ka tagto khibradaada faallooyinka.
Sida loo ogaado haddii aan xidid ahay iyo in kale
Waxaa laga yaabaa inaad shaki ka qabtid inaad xididday taleefankaaga Android iyo in kale. Wax suurtogal ah haddii aad taleefanka ka iibsatay qof kale. Marka haddii aad rabto inaad ogaato, waxaa jira habab aad u fudud oo lagu ogaan karo. Habka ugu fiican ee lagu hubiyo waa adoo adeegsanaya app. Codsigan waxaa loo yaqaan 'Root Checker'.
Codsigan, oo aad kala soo bixi karto link this, waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu hubiyo inaad xidid tahay iyo in kale. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ku rakibto barnaamijka taleefankaaga Android. Gudaha gudihiisa waxaad ka heli kartaa badhan kuu oggolaanaya inaad falanqeyso qalabkaaga. Marka, waxay kuu sheegi doontaa inaad xidid tahay iyo in kale. Way fududahay in la ogaado, waxayna qaadataa waqti yar.
Kawaran hadaanan xidid ahayn
Haddii aan xidid ahayn, waxay u maleyneysaa inaanaan marin u helin rukhsadaha superuser. Isticmaalayaasha xididka ku ah Android waxay marin u helaan galka asalka kaas oo nidaamka hawlgalka lagu rakibay. Tani waxay markaa noo oggolaaneysaa inaan wax ka qabanno feylasha la yiraahdo markay doonaan. Sidaas darteed isbeddello badan ayaa lagu sameyn karaa arrintan.
Sidaa darteed, haddii aadan xidid ahayn, ma lihidin fursadahaas. Waxaad si fudud u awoodi doontaa inaad si caadi ah u adeegsato taleefankaaga Android, adigoon marin u helin faylalkaan kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho qaybo ka mid ah taleefankaaga Android.
Ma khatar baa in xididada moobiilka?
Soo afjarida mobiladaada waa wax ku siin kara faa iidooyin badan iyo howlo dheeri ah. In kasta oo ay sidoo kale jiraan khataro taxane ah oo aan la iska indho tiri karin. Ugu horreyntii, haddii aad ku rakibto codsi taleefankaaga, rukhsaddo qaar ayaa la codsadaa, si loo awoodo in lagu rakibo qalabka.
Haddii aad tahay isticmaale xidid, waxaad siisaa codsi marin dhammaan faylasha nidaamka. Tani waxay u maleyneysaa in arjiga uusan laheyn xaddidaad ficil ah oo ay helaan wax walba. Wax aad khatar u noqon kara, gaar ahaan haddii aad ku rakibtay codsi xaasidnimo ah. Maadaama aad awoodi doontid inaad ku sameyso wax walba oo aad rabto qalabkeena.
Dhinaca kale, habka loo rujin Android adag yahay. Tani waa sababta aan loogu talineynin dadka isticmaala khibrada yar inay sidaa sameeyaan. Maaddaama ay fududahay in qalad la sameeyo, taas oo cawaaqib xumo u horseedi karta qalabkeenna. Sidoo kale mar aad xidid noqoto, waa inaad aad uga taxaddartaa waxa aad rakibayso, rukhsadaha ama faylasha aad gacanta ku hayso.
Sidaa darteed, rujin telefoonkaaga Android waa wax ay tahay in si fiican looga fikiro ka hor inta aadan sameyn. Maaddaama haddii waqti kasta aad ka qoomameyso, in kasta oo ay suurtagal tahay in wax laga beddelo hannaanka, ma sahlana in lagu guuleysto.
Ma damaanad qaadkii xididnimadiisa ayaa la baabi'iyey?
Waxaa laga yaabaa inaad ka maqashay mawduucan mararka qaarkood. Tani waa mid ka mid ah arrimaha ugu murugsan markay timaado xididka. Sida waxaad waayi kartaa damaanada taleefankaaga Android, laakiin 100% lama hubo. Sidaa darteed, waxay ku abuurtaa shaki badan macaamiisha.
Waa run qayb ahaan, laakiin haddii aad taqaanno dardaarannada Midowga Yurub, waxaa suurtagal ah inay tani joojinayso inay caqabad noqoto. Haddii aad degan tahay waddan Midowga Yurub ah oo aad ka iibsatay taleefanka mid ka mid ah waddamada, xaaladdu xoogaa way adag tahay. Maxaa intaa ka badan, badanaa waxay kuxirantahay soo saare kasta.
Inkasta oo isbeddellada sannadihii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa wax soo saara noqdeen kuwo aan loo oggolaan arrintan. Tusaale ahaan, haddii ay dhibaato kaa haysato taleefanka Samsung, waxa ugu horreeya ee ay eegaan waa inaad xidid tahay iyo in kale. Hadday sidaas tahay, dayactirku kuma xirnaan doono damaanad. Wax u noqon kara kharash aad u badan isticmaalaha. Laakiin, soo saare kasta ayaa awoodi doona inuu si fudud u ogaado haddii aad xidid tahay.
Laakiin, sidaan soo sheegnay, waxay kuxirantahay soo saaraha. In kasta oo ay tahay khatar dhab ah, in markii aad xididdo aad waayi doonto dammaanadda. Xilligan ma jirto siyaasad cad dareenkan. Haddii shaki jiro, waxaad had iyo jeer la tashan kartaa websaydhka soo-saaraha, halkaasoo badanaa laga helo macluumaad ku saabsan.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa xidid xidid Haddii ay dhacdo in codsi kasta uu ku siiyo dhibaatooyin ah inaad noqoto isticmaale super.
Maxaan sameeyaa haddii kadib xididka android aanan cusbooneysiin karin?
Mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aan wajihi karno markaan sameyneyno xidid. Markaad tan ku sameyso taleefankaaga, ogeysiisyada cusbooneysiinta badanaa way baaba'aan. In kasta oo ay in badan ku xiran tahay soo saare kasta. Sidaa darteed, cusbooneysiinta OTA, oo ah waxa aan si caadi ah uga helno taleefanka, waan joojineynaa helitaanka.
Tani waxay nagu qasbeysaa inaan raadino cusbooneysiinta kaligeen. Waxaan leenahay bogag aad ku soo dejisan karto cusboonaysiintaan gacanta, qaab APK ah, tusaale ahaan. Laakiin, tani waxay sababi kartaa dhowr khataro. Ugu horreyntii, ma ogin haddii ay tahay cusbooneysiin ammaan ah sida Android. Sidoo kale, adigoo rakibaya, waxay u badan tahay inuu xididka ka saari doono taleefanka.
Sidaa darteed, marka aad cusbooneysiiso cusboonaysiinta, waxay u badan tahay inaad mar kale xididdo. Marka waa inaad martaa nidaamka mar labaad. Marka macno ahaan waxaa jira xoogaa cillado oo adkeynaya inaad heshid cusbooneysiin ama rakibid.
Talooyin in maskaxda lagu hayo ka hor soo afjarno
Haddii aad qaadatay go'aanka ah inaad xididdo taleefankaaga Android, waxaa jira dhowr dhinacyo oo ay tahay inaad tixgeliso ka hor intaadan bilaabin hawsha. Sidan oo kale, haddii ay dhacdo inaad hawsha bilaabayso, wax dhibaato ah kala kulmi meyso inta lagu jiro.
Kahor intaadan bilaabin, waa inaad hubisaa inaad haysato ugu yaraan 60% batari taleefanka. Waa geedi socod qaadan kara waqti dheerna qaadan kara. Sidaa darteed, waa inaadan waligaa ku sameyn batteri hooseeya. Maaddaama tani ay sababi karto dhibaatooyin ama laga yaabo inaadan awoodin inaad dhammaystirto.
Haddii aad ku xididayso kombiyuutarka, waxaa fiican in la isticmaalo laptop. Tan iyo markii aad sidan ku tiirsaneysid kan hadda jira. Haddii ay dhacdo in kumbuyuutarka la xiro, maxaa yeelay korontada ayaa baxda, waxaad u geysan kartaa dhaawac aan laga soo kaban karin taleefanka. Sidaa darteed, laptop-ka ayaa ka amni badan kiiskan.
Markaad xididdo, xogta ku keydsan taleefanka lama tirtiro. Kuwa aad ku hayso xusuusta gudaha iyo kuwa ku jira SD midkoodna. Haddii aad rabto inaad nuqul samayso way fiicantahay, amniga, laakiin sinaba looma tirtiri doono.
Sideen uga saaraa xididka
Haddii aad isticmaale xidid ku ahayd taleefankaaga Android, laakiin aadan arkin wax faa'iido ah oo aad rabto inaad beddesho, waxaan fursad u leenahay inaan sidaas yeelno. Dareenkan, waxaa jira fursado dhowr ah, oo ku tiirsan qeyb ka mid ah ROM-ga aad isticmaashay markii aad soo afjarneyso taleefankaaga.
Waxaa jira xoogaa ROM ah oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah unroot. Waxay leeyihiin muuqaal kaa caawinaya inaad beddesho isbeddelka oo aad taleefanka ugu celiso xaaladdiisii ​​hore. Waa hawl loo yaqaan Unroot. Laakiin maahan wax aan ka heleyno dhammaan ROM-yada caadada ah ee halkaas ka jira.
Intaas waxaa dheer, waxaan adeegsan karnaa barnaamijyo kale. Sahamiyayaal faylka ah sida ES Explorer ayaa naga caawinaya inaan baabi'ino fayl xidid ah, sidaa darteed markii la dhammeeyo, markii dib loo bilaabayo taleefanka, waxaan dib ugu helnay taleefanka xaaladdiisii ​​hore. Waxa kale oo jira barnaamij kale oo ka mid ah Play Store, kaas oo kuu oggolaanaya inaad dib ugu noqoto xididka taleefannada oo dhan. Waad soo dejisan kartaa aquí.
Haddii kan aad rakibtay uusan ku siinin suurtagalnimadaan, waad ka saari kartaa gacanta. Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad dib u rakibto qalabka rasmiga ah. Soo saarayaasha qaar waxay siiyaan dadka isticmaala qalab ay dib ugu rakibaan qalabkii ay haysteen, si xididka gebi ahaanba looga saaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xididka Android » Sida loo xidido Android
183 faallooyin, ka tag taada
macluumaadka ka tirtir taleefanka? nexus 5 in markasta oo aad wareegeyso ay tahay inaad qaabeyso ... mana doonayo
post fiican. Waxaan awooday inaan xididadahayga rajada wanaagsan ee suugaanta si cajiib ah 2 daqiiqo gudahood. Aad baad u mahadsantahay.
Waa maxay dalabka aad isticmaashay?
Sideen ugu beddelaa oo ugu wareejiyaa Isbaanishka galaxi s4 tan iyo markii aan cusbooneysiiyay wax walbana ay ku ahaayeen Ingiriis
Waxaan ku biirayaa su'aasha, ku xididka habkani ma ku jiraa qaabaynta?
Ku jawaab george
Habkani ma qaabeeyo ama masaxo wixii xog ah.
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan hayaa galaxy s2 t989, marka waxay ku yiraahdaan hercules taleefanka gacanta… waxaad u malaynaysaa inaad u adeegsan karto abkaas si aad u beddesho nooca androit-ka. Jawaabtaada waan sugayaa
Ku jawaab kevin vargas
Hello Francisco, ma iga caawin kartaa inaan iibsado Samsung Galaxy Ace 4 oo waxay ii soo baxday in la soo sheegay in la xaday, qofkii iga iibiyay (saaxiibkay hore) mas'uul kama aha, sidee baan u beddeli karaa imie oo sidaas ayaan ku noqon karaa awood u leedahay in ay isticmaasho?
Ku jawaab gissel
Waan sameeyay oo ma jiro qaab loo baahdo.
Ku jawaab cfgorka
miyuu ku habboon yahay nexus 4? Dammaanadda ma luntay haddii la sameeyo?
Ku jawaab arrhenius
Waxaan hayaa xperia s, maxaa loo rujiyaa miyay ku fiican tahay xawaaraha iyo muddada batteriga?
Ku jawaab Karmen
Adiga oo leh badhan guduudan iyo mid midab buluug ah ama midab casaan ah leh, waxaad dooneysaa inaad qortid «badhan guduud», markii midabku macnihiisu noqon karo «Midab casaan kiciyey oo jiidaya ku xadgudbay»
on XT890 ama Razr I, kaliya hal badhan oo guduudan ayaa soo baxa dhamaadka. Mana xididayso
Ku jawaab cofla2004
Giora yar dijo
Deluxe, waxay ku shaqaysaa si weyn kiniinka Samsung Tab 3.
Jawaab Giora Minor
Hello Giovanni, ma haysaa ST-210 oo leh Android 4.1.2? Waxaan ahay Andres ka Argentina. Mahadsanid!
wow si sax ah ayey u shaqeysay aad ayaad u mahadsantahay. Salaan sxb.
Adan ugu jawaab
Nexus 7 2012 ma shaqeynayo 🙁
Jawaab Adrián Gracia
Sideen ku helaa codsiga maamulka xididka Shiinaha?
Gali Play Store oo rakibi SuperSu
Wax la mid ah ayaa igu dhacay, ka dib markii aan rogrogay, waxaan ku dhejiyay supersu luqadeyda, waan furay, cusbooneysiiyay binaries waana la rakibay, ka dib markaan dhammeeyo wax walba waxaan aaday miiska Android, dejimaha, barnaamijyada, arag dhammaan, raadi Xididka Shiinaha oo gab. Halkaas wuxuu ka bilaabay supersu inuu maareeyo xididka. Ma aanan helin ikhtiyaar kale
Si fiican ayey iiga shaqeysay aniga s3 mini laakiin markaa maxaan ku sameeyaa?
Oo waa kuwee codsi ku habboon in barnaamijyada loogu wareejiyo qolka maxaa yeelay waxaan isku dayay mid mana shaqeynin ..
Francisco habeen wanaagsan
Waxaan sameeyay rakibaadda sayidka xididka ah ka dib markaan karti u siiyay, waxaan soo degsaday codsi la yiraahdo Font waa in la beddelo xarafka is-dhexgalka, waxa dhacay waxay ahayd in lg g2 uu dib u billaabay naftiisa iyo markii ay billaabatay inay siiso shaashadda oo ay la socoto farriin: soo dhawow si loo nadiifiyo: markale iyo markale waxayna qaadataa nus saac. Waan damiyaa waana soo noqdaa waana soo noqnoqonayaa isla farriintaasina way soo badanayaan.
Waxaan kuu sheegayaa inaan ka walwalayo su'aalahaygu waxay yihiin: Dhaawac nidaamkaaga qalliinka? lumiyay damaanad? Sideen ugu soo celiyaa nolosha? FADLAN II CAAWIN.
Ka raadi androidsis qoraal si aad ugu iftiimiso ummad asalka u ah qalabka khadka tooska ah mar labaadna waad noolaan doontaa.
Waxaan ku sameeyay samsung galaxy mega waxaan u malaynayaa in aan xidid galiyo oo super super chinese uu soo baxo laakin waxaan soo dagsaday hubiyaha rootka waxayna ii sheegaysaa in aanan xidid ahayn, sida kaliya ee aan kaga saari karo xididka shiinaha waxaay aheed in aan soo degsado romankayga rasmiga ah oo aan dhalaalayo by odin erey kale uma shaqeynin tusaalaheyga samsung galaxy mega 6.3 att
Ku jawaab yomar
Miyaa lagu xididi karaa isla barnaamijkan?
Nexus 5. Android 4.4.2. Ma aysan shaqeyn
Isla halkaan, Nexus 5. Android 4.4.2. Ma aysan shaqeyn
Jawaab Luri Olete
Haddii ay ii shaqeysay lg g2 d805 oo aan ka soo qaatay Claro Colombia oo aan horeyba u tirtiray codsiyo horay loo soo raray oo kaliya boos ka qaadan kara, waad ku mahadsan tahay Francisco casharkaan aan horeyba isugu dayay ee qaab kale anigoo aan guuleysan
Jawaab Adolfo Quevedo
Waxay ka shaqeysay kiniin t7014 sharaf leh oo soosaarka Argentine ah oo aan ka ahayn kiniinka Shiinaha ee hisense sero 7 Lite in disguise ... Xididku wuu fudud yahay, loomana baahnayn in dib loo bilaabo kaniiniga ... Kuwa dhaha inay hoos u dhigeen hubiyaha xididka ah waxaanan ku toogtay iyaga maya Maya Iyagu waa xidid, waa inay qas ku noqdeen sababo la xidhiidha maamulaha xididka Shiinaha, hubaal markaan waydiiyo inay doonayaan inay u oggolaadaan xididka xididka hubsadaha ah maadaama ay fahmayaan Shiinaha oo ay ciyaareen wax kasta oo xannibay arjiga si loo xakameeyo marinka xididka, oo lagu hago midabada markii la gelayo Codsiga maamulka Shiinaha, haddii xarfaha Shiinaha ay casaan yihiin, abku ma laha rukhsad rujin, marka waxaan kugula talinayaa inaad soo dejiso Supersu isla marka ay xididdo, noqo taxaddar, codsiga Shiinaha ayaa sidoo kale kuu digaya inaad Supersu rabto xididka xididka, sifiican u fiiri meesha aad taabatid si aad u siiso ogolaansho, ka dibna ka jooji dalabka Shiinaha goobaha codsiyada oo ka jooji rukhsaddiisa supersu haddiiba ay dhacdo si aad wax walba ugu hesho amar .., iyo jacaylka di Ha soo dejin farta, waa inaad aad u hubsataa in ROM-ka uu taageerayo hadii wax la mid ah aysan kugu dhici doonin adiga adoo adeegsanaya lg ... Waad ku mahadsan tahay habka kaliya ee aniga ii shaqeeyay
Ku jawaab Dahaka Dunkelheit
ok anigoo raacaya talaabooyinka francisco iyo golayaashaaga waxaan ku samayn doonaa kiniiniga maadaama aan isku mid ahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii isbedelada tuubada ay kaa heshay, hadii aad kala soo bixi karto codsiyo badan, miyaad ku wareejin kartaa kaarka? Aad baad u mahadsantahay !!
Ku jawaab si aad ujecel
Sidee baan unroot?
Ku jawaab allan
In Motorola, moto g dhamaadka ayada oo kaliya soo baxda badhanka guduudan. Mana xididayso
Ka jawaab yeey
Iima shaqeyso aniga xperia z waxaan helayaa badhan guduudan ??????
Waxay si fiican iigu shaqaysay aniga: i-joi (i-Call 350); kaliya marka la rakibayo Super Su si loo cusbooneysiiyo binaries, waxay i siinaysaa = herror. Dhinaca kale… markii la rakibayo Root Checker Basic… .SI waxay ii sheegaysaa in la leeyahay «Hambalyo Qalabkani wuxuu leeyahay sumcad xidid ah» ¿¿¿¿¿
Ku jawaab Carmelo
NoTE II ma aysan shaqeynin waxay ku leedahay qalad amniga cusub ee Saumsung iyo badhan guduudan ayaa u muuqda yaa garanaya waxa ay leedahay hehehe
Ka dib markii la isku dayay habab kala duwan ugu dambeyntii mid ka mid ah ayaa si fiican uga shaqeeyay cusbooneysiinta Lg 7 jelly bean, mahadsanid Francisco.
Ku jawaab lilia
Waxaan hayaa asus memo pad fhd 10,1 oo leh adroid 4.3 waxbana ma sameeyo gabi ahaanba ama xidid ama talaabooyinka ma qaado laakiin ma xidido
Ku jawaab viruschip
Way ii shaqeysay, si dhakhso leh oo fudud !! Caadi ahaan kama faalloodo! Waan hayaa wanaagga ama xumaanta! Laakiin markan waxaan doonayay inaan la wadaago haddii ay ku shaqayso LG pro Lite-ga iyo kuwa wax ka faallooda waa maxay midabka guduudka ah, aniga ahaan wuxuu ahaa midka bidixda bidix ka cas oo kan midigta ka xigaana wuxuu ahaa guduud = guduud !! hahaha maxaa gabagabo ah iyo nasiib wacan!
Jawaab Ramsés García
Waxaan xidid u ahaa galaxy tab GT-P3113 oo si weyn ayey isu bedeshay, ma qaabayn doono ama tirtiri maayo. Mahadsanid !!!!!
Jawaab Alexander De La Asuncion
Way ii shaqeyn weyday s4 mini-ga
nadiif ah dijo
Waan soo dejiyaa, waxaan u sameeyaa dhammaan tallaabooyinka si sax ah laakiin labada midab ee guduudka iyo casaanka ah ma muuqdaan. Kaliya guduud iyo horumar dambe. Qofbaa i caawiya
Ku jawaab maty
Xulashada ugu dambeysa waxaan kaliya helayaa badhan weyn oo midab leh oo aan aheyn casaanka iyo guduudka ka muuqda qabashada.
Telefoonkaygu waa magac Samsung galaxy ah wax kale oo aan xidid u noqon karin haddii aad i caawin kartid aad baan u qadarin lahaa
Aad ayaan ugu fiicanahay daytona laakiin waan tirtiraa ap
miyuu ka shaqeeyaa samsung s4 mini ??
Ku jawaab susi
Wuxuu ahaa toban !! Waxa kaliya ee aanan aqoon waa sida loo joojiyo barnaamijka isticmaalka superu. Waxaan hayaa android 4.1.1 kumana siinayo ikhtiyaarka aan ku joojiyo. Haddii aad taas iga caawin lahayd, taasi way fiicnaan lahayd.
Qofka haysta i-call 350 wuxuu ubaahanyahay nuqul dhamaan feylasha galka APP si sax ah si uu uhelo, waa inaad aado xasuusta gudaha ee mobilada wadada SYSTEM / APPna waa inaan tirtiro dhowr feylal oo aanan ' xusuusnow kuwa aan tirtiro waxayna i siisaa qaladaad badan, fadlan haysato haddii qof iga dhigo nuqul galkaaga, emailkeyga pjuanjo_1@hotmail.com
Caawi ku rakibkiisa waan sameeyay howsha laakiin ugu dambeyn ma muujinayo wax ka badan badhanka guduudka ee ma ahan midka casaanka halkaana kama dhacayo ..
Dhamaadkii waxaan iska fogeeyay sayidkii oo super wuxuu ordaayay toban. Hubiyaha xididka wuxuu ii sheegayaa inuu xidid yahay. Waan soo dejiyey greenifie-ka oo barnaamijyada hurdo geliya oo hadda alcatelkeyga ku saabsan sanam taabashada ayaa si habsami leh u socda. Aad baad u mahadsantahay. Kuma dhiirrigelin inaan xididdada u siibo. Fiiro u yeelo in Francisco uu ka digayo in dhamaan taleefannada gacantu aysan ku xidhnayn nidaamkan. Salaan ka timid Argentina.
Jawaab santiago marcos soria preiti
ma la jaan qaadi karaa sony sp?
Barnaamijku si fiican ayuu iigu adeegay, waxaan haystaa Samsung S4 su'aashayduna waxay tahay, ka dib markaad xididdo taleefanka, miyaan ka saari karaa arjiga?
Waxaan xidid u dhigay xperia L waana cajiib… .laakiin galaxy s3 mini waxaa kujira oo kaliya badhan guduud ah what .. waa maxay talaabada xigta?…
Ku jawaab ozuki
Waxaan haystaa mooto g waan rakibey, waxaan raacay tillaabooyinka waxaana soo muuqday batoon midab guduudan leh, waan cadaadiyey waxayna u muuqataa xarfaha Shiinaha laakiin waxaa ku qoran sdcard iyo xidid .. Anigana waxaan adeegsaday hubiyaha xididka waxayna ii sheegaysaa inaanan xidid ahayn . sida aan sameeyo
Ma cusbooneysiin karo aaladda Samsung galaxy s III mini sideen uga saari karaa barnaamijkan mahadsanid
XPERIA Z Ultra, waxaan raacay tillaabooyinka aakhirkana waxaan kaliya arkayaa badhan guduudan, ma ahan mid midabkiisu yahay mid guduudan iyo mid casaan ah, waxaan hubiyay bal inuu xididaysan yahay iyo in kale oo uusan shaqeyn. Ma jiraa qof garanaya beddel kale?
Ku jawaab Carlo Coello
marka aad tahay isticmaale xidid ma cusbooneysiin kartid waa mid ka mid ah cilladaha aad ku cusbooneysiin karto gacanta adiga oo soo degsanaya oo isticmaalaya pc
Waad salaaman tahay waxay ku shaqeysaa jeebka galaxy oo lagu daray 4.0.4
Waa salaaman tahay, waxaan arkaa in isla waxaas oo kale ay ku dhacaan dad badan tallaabada ugu dambeysa, kaliya hal badhan oo guduud ah ayaa u muuqda in markii la cadaadiyo uusan waxba ... ... oo xididku uusan shaqeyn ... wax xal ah? Waxaan leeyahay caan galaas. Aad baad u mahadsantahay.
Sida loo xidido galaxy s4 mini oo wata android 4.2
mahadsanid badan waxay si fiican iigu shaqeysay alcatel one touch m, pop (520),
Waxaan horeyba isugudayay siyaabo kale mana ii shaqeyn, laakiin taada ayaa si fiican ii shaqeysay 😀
Waad salaaman tihiin asxaabta, tan ayaa wanaagsan
naa s4mini ma siinayo, dhamaadka waxaa jira 2 badhan
Ku jawaab jun
Iima aysan shaqeynin aniga oo ku saabsan galkayga, dhamaadka waxaan kaliya helayaa badhan guduudan oo dheer
Ku jawaab haa
waa wada been ..... manga de boludos al fado
Ku jawaab rami
Waxaan kuu xaqiijin karaa inaanan sameynin, tan iyo markii aan ku sameeyay alcatel. Waan hubiyey waxaanan isticmaalayaa barnaamijyo u baahan superuser.
haye saaxiib, ma u shaqaysaa lg l9 leh android 4.0?
Barnaamijkeyga oo ah ka saarida iyo dhaqaajinta barnaamijyada sd waxay iga codsatay inaan noqdo rott markaan talaabada talaabo u qaadayo si fiican ayey u shaqeysay iminkana waan ka saari karaa codsiyada howl wadeenka mobilka xiiradeyda.
Ku jawaab clau
haye, waxaan rakibayaa superus kale kan arjiga i siiyaana ii oggolaan maayo inaan isticmaalo .. maxaan sameyn karaa?
Waan sameeyay waxkasta oo aad galisay waxaanan doonayay inaan hubiyo in qalabkeygu horeyba ugu xirnaa asal hubiyaha laakiin wuxuu igu dhahayaa "Waan ka xumahay" Qalabkani marin uma laha wadada saxda ah
Ma ii sheegi kartaa waxa la sameeyo?
Waxaan hayaa kiniin acer iconia B1-A71 version 4.2.1
Aad baan u qadarin lahaa.
Ku jawaab Billy
Qof baa ku tijaabiyay xperia m (c1904) ... Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay ku shaqeyneyso tusaalahaas
Waxaan haystaa tusaalahaas laakiin kuma dhicin inaan xididada u siibo
Ku jawaab Jez
su’aal kale maxaa loogu soo degsaday qaab EXE ah?
Waxaan ka shaqeeyaa jeebkayga Samsung galaxy neo mahadsanid ugu dambayntii waxaan ahay xidid mahadsanid bro
Fiiro gaar ah uma shaqeynayo sumcadda Samsung galaxy ama x phería iskuday walaalihay iyo waxba
Waad salaaman tahay… magaceygu ​​waa Brian… waxaan rabaa in aan kaa caawiyo… arinku waa in aan dhib ku qabay barnaamijkaan waana marka aan rakibayo kaliya ma lihi s4keyga ee mar aan rakibo iyo markii aan ogaaday in aysan shaqeynin waxaan doonayay in aan tirtiro laakiin ma sameyn karo ... waxaan rabay inaan ku waydiiyo sababta aanan u sameyn karin tan iyo sidee baan u sameyn karaa si aan uga tirtiro qalabkeyga ... fadlan rajo waad i caawin kartaa ..!
Ku jawaab brian
Waad salaaman tahay ... magaceygu ​​waa Brian ... waxaan rabay inaan kaa codsado caawintaada ... arinta ayaa ah inaan dhibaato ku qabay barnaamijkaan waana markii aan rakibayo kaliya ma aanan rujin s4-gayga laakiin mar baan rakibay markii aan ogaaday in aysan shaqeynin waxaan doonayay in aan tirtiro laakiin ma sameyn karo wuu i caawin karaa ..!
Taabashadayda 'Alcatel One taabashada' 918-D waxaan ku helayaa bar dheer oo guduud ah, laakiin ma jiro mid guduudan oo aan wax kale samaynayn. Waan siinayaa waxna ma jiraan. Waxaan helaa xarfaha qaar markaan riixo. Aad u xun, waxaan isku dayi doonaa qaabab kale
Rikoor aq haddii aadan aheyn android 4 wixi kadambeeya, barnaamijkaan kama shaqeyn doono alcatel-kaaga.
Boggee ah ayaan kala soo bixi karaa
Ku jawaab Florentino obando
>. <kuma shaqeeyo HTC VIVID kaliya qaabeynta unuga
Heer sare! KUNA MAHADSANID!
Ku jawaab Nahilí
In my lg L7x ma shaqeyn, kaliya badhan guduudan ayaa soo baxay mana rujin
Kabtan Whipala dijo
che francisco ma shaqeyneyso ... Wax walbana waxaan u sameeyey sidii ay ahayd ... rakib barnaamijka ... wax walbana waxay raacaan iyadoo la raacayo tilmaamaha ilaa dhamaadka. laakiin hubiyaha xididka ayaa ii sheegaya in aanan xidid ahayn
supersu-na iima muuqdo aniga sidoo kale. waxaan hayaa galax s3.
Qaansoroobaad qaangaadh ah
Jawaab Kabtan Whipala
Raadi Androidsis "Sida loo xidido Samsung Galaxy S3" inaad leedahay cashar gaar ah oo lagu helo Root.
leeyahay virust in apk faylka dsd pc m xayiraya antivirus
Ku jawaab iorelk
Download APK bilaash ah dijo
Thanks corduroy, wax badan ayaad iga caawisay wareegan.
Jawaab Bilaash APK Download
Waxaan leeyahay nova ma aqaano inaad xidid yeelan karto
Ku jawaab carlos lopez
Ka shaqee lenovo s960t
Haddii super Su uu yiraahdo ma xididaysan, waa sababta oo ah maahan. Waxaa jira laba nooc oo xidid ah mid adeegsade xidid ah kan kalena adeegsade cusub ...
Ku jawaab Juquraan tarqui
markuu daminayo oo uu kusocdo xididka
Waan fidi karaa
Ku jawaab archon
Miyuu ku jiri karaa motorola d1?
Ku jawaab noel
Xperia Go waa wax aan macquul aheyn in xidid hore ayaan iskuday wax walbana 🙁
Ku jawaab danieldgtldaniel
Waxaan isticmaalay samsumg s3 international (i9300) mana aanan qaban, kaliya waxaan helay bar guduudan mana jiraan wax soo baxay, isticmaal robot checke waxayna ii sheegaysaa inaysan xidid ahayn sida aan yeelo
Miyaad kajawaabi kartaa kuwa kaliya hela badhanka guduudan dhamaadka? MAHADSANID
Dhowr ayaa mar hore ku weydiiyay oo aadan qofna uga jawaabin arintaas.
Dabcan waan ka jawaabi karaa, waa sida ugu fudud ee barnaamijku uusan ula jaan qaadi karin boosteejooyinkan.
Iga raali noqo qolkeyga iyo Samsung Galaxy Mega GT-I9152 barnaamijkaanna aniga ima uusan shaqeysan, qof ma iga caawin karaa inaan xidido qolkeyga fadlan ... wax kale ayaa ah hadii qof garanayo sida loogu badalo 4G, fadlan i caawi .
Ku jawaab sthefy89
Tani aniga iima aysan shaqeeyn, qolkeygu waa android version 4.3 oo waxaa jira kaliya hal badhan oo buluug ah oo dhan oo shiineys ah oo erayga xidid dhexda ku yaal.Waxaa jira qaab kale oo loo sameeyo iyada oo aan la jajabinin oo aan la isticmaalin pc?
Ku jawaab guri
miyuu u shaqeeyaa M4?
Mario Waxaan haystaa M4TEL ss1090 oo si fiican ayay ii shaqaysay
Jawaab Pablo Lopez
Iyo Samsung galaxy s saddex mini
Ku jawaab Francisco javier
ma rujin kartaa liinta gova liinta leh?
Ku jawaab libistico
Waxaan hayaa sumad taleefanka gacanta ah, sidee xidid loo noqon karaa oo waxaan isku dayaa dhowr barnaamij laakiin waxba ma dhacaan
Jawaab josimar garcia
Sidee ku saabsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad rujin karto motorola X model XT1058, waan ku qanacsanahay haddii aad iiga jawaabi karto, maadaama aanan wali ku dhiirrigelinin xididkeeda, maadaama ay xidid qaadatay si aan u soo ceshto feylasha qaar ee aan si kama 'ah u tirtiray, ka dib this aad unroot kartaa?
Aad baad ugu mahadsantahay horay !!
Jawaab Jorge Monsivais
MY baaritaanka pantech ma doonayo inuu daarto wifi ka dib markii dib loo soo celiyo nuqul la soo celiyo lambarka sirta ah ee Wifi ... sidee ayaan OS markale ugu rakibaa xididka?
Ku jawaab ferinxon
Sideen ugu noqdaa gobolka warshadda anigoo leh sayidka xididka?
Salaan: sidee baan uga saari karaa apk-ka Shiinaha oo ugu beddeli karaa SuperSu? Sida caadiga ah rukhsadaha ayaa ku soo baxa Shiinaha. Mana fahmin meesha aan ku calaamadeynayo. Waxaan ubaahanahay jawaab deg deg ah fadlan.
Ku jawaab mickaela
Isla marka aad ka soo degsato SuperSu ama SuperUser Dukaanka Play Store, waxay ku waydiin doontaa inaad rabto inaad ka tirtirto midka Shiinaha.
Waa salaaman tahay: Waxaan hayaa mini Galaxy SIII oo sifiican ayey u dhacday, rujinku dhib malahan laakiin markaan rabo inaan isticmaalo superSU ima ogolaanayo, maxaa yeelay dalabka Shiinaha asal ahaan aniga ima ogola. Waxaan ubaahanahay jawaab deg deg ah fadlan. Oh ... iyo kuwa haysta mootada RARZ D1 xidid iyada oo aan dhibaato laga helin jajabka.
Xulashada kale ee aad haysataa waa inaad gasho wadada / xogta / barnaamijka ama / Nidaamka / barnaamijka oo aad raadiso apk-ka dalabka Root-ka Shiinaha, taas oo ah, SuperUser-ka Shiinaha oo aad ku masaxdo wax kasta oo xidid fayl sahan ah. Kadib waxaad dib u bilaabi doontaa oo aad rakibi doontaa Superuser ama SuperSu waana taas.
Sawirka meeleynta Pablo Alvarez dijo
Ka waran asxaabta, kaliya waxaan arkaa shaashad midabkeedu yahay buluug waxaanan ku hubsaday hubiyaha xididka haddii aan xidid ahay oo ay ku tiraahdo maya, maxaan sameeyaa Waxaan hayaa mini IBS
Jawaab Pablo Alvarez
Salaan waxaan haystaa Sony L waana jeclaan lahaa inaan xidido. Haddii aan isticmaalo arjiga aad bixiso ... ma fiicnaan lahayd? Sababtoo ah ma doonayo inaan taleefankayga xiro. Mahadsanid salaan
Ku jawaab Hikari
Anigu ma furi doono arjiga galaxy note 2 i317m gambaleelka iyo sumowga kaliya waxaan helaa gandalf
Galab wanaagsan, aan kuu sheego waxa igu dhacay aniga oo la kulmaya barnaamijkan oo leh lg g2 oo wata kit 4.4.2, haddii aan horey u ogahayna inaanan ahayn inaan isku dayo, waan rakibay oo aan xidid yeeshay, waxaan isku dayay barnaamij u baahnaa xididka ch2 ama wax la mid ah, Si wax looga beddelo qiyamka ciyaaraha, oo ay shaqaysay, markii aan dib u bilaabay taleefanka, mar dambe ma shaqayn, mar labaad ayaan rakibay, waxay ii sheegtay in hubiyaha xididku xidid yahay, ama wax wax la mid ah ayaa la odhan jiray, waxaan rakibay super su mana sii shaqeynaynin xididkayga, waan tirtiraayaa wax walbana markale ayaan ku rakibaa Shiinaha, markale xidid baan ahay, waan ku degdegaa inaan rakibo waxaan ubaahanahay, barnaamij aan koobiyeeyo oo aan kaydiyo dhamaan wihayga Furayaasha sirta ah (kaliya xididka) wayna ii shaqeysay, laakiin waxay martay oo kali ah iyadoo banaan, wax walbana halkan ayaa lagu kala baxay, barnaamijku wuxuu i weydiinayaa inaan dib u bilaabo wifi, ka hor markii aan xididka ahaa 4.2 ima weydiinin laakiin waan siiyay ok, laga bilaabo waqtigaas waxaan ku hayaa wi fi on baarka, sidii oo aan doonayo inaan daarto, laakiin aniga oo aan dhab ahaan u jeedin marnaba, sida marka aan damino oo aan shidno, laakiin wadada dhexdeeda. Waxaan dib u bilaabay taleefanka, weli waa isku mid. Ma aanan haysan ikhtiyaar dib-u-dejin adag, waxaan lumiyay wax walba, iyo wax lala yaabo, wali waxay ahayd isla sidii kadib markii dib-u-dejintii adkeyd, halkaas ayaan ka walwalayaa tan iyo markii aan dib u dajiyay 2 jeer iyo waxba, waxaan ku dhawahay adeegga farsamada, laakiin dhamaadka iyo ikhtiyaarkii ugu dambeeyay ee aan iskaga dayay pc-ga oo leh pc suite oo dib loogu rakibo xirmada kat 442, ima ogolaanin, ilaa aan arko ikhtiyaarka ah in la cusbooneysiiyo cusbooneysiin xun (waxaa loogu yeeray wax la mid ah, ikhtiyaarka aanan sameyn Xusuusnow si sax ah) waan sameeyay waana qaatay ilaa iyo markii aan cusbooneysiiyay xirmada 442, waan dhameeyay waxaan sameeyay dib u dajin kale oo adag waana la hagaajiyay.
Waxaan u sheegayaa hadday dhacdo in qof uu ku dhaco dhibaato la mid ah, su'aashayduna waa caqliga Francisco waxay tahay inaad u malaynayso inay dhici lahayd, waxay noqon lahayd xididka xun ama wuxuu ahaa barnaamijka furaha sirta ah, iyo sababta kaliftay in dib loo dejiyo kaligeed ma hagaajinayo oo waxay ahayd inuu dib u kk442 dib u hagaajiyo? Waad ku mahadsan tahay akhriska iyo salaanta ka timid Argentina ilaa Francisco iyo qof walba.
Ku jawaab maximiliano
Sideen ku furfuraa fadlan?
Weyn Mahadsanid, wax walba waxay noqdeen kuwo aad ufiican.
Ku jawaab Andy Moreno
Ma ogtahay haddii ay ku shaqeyso Primux Zeta?
waxa ugu fiican ayaa ah inaad tijaabiso oo aad noo sheegto.
Miyuu u shaqeeyaa lg l3? 🙂
Ku jawaab Antonia Belén
Sideen unroot a samsung galaxy s4-mini gt-19190 jelly bean 4.2.2?
MA AQOON waxa dhici doona, maalmo ka hor barnaamijka wuu ii shaqeeyey sida ku cad shaashadaha shaashadda, iyo hubiyaha xididka ayaa xaqiijiyey inaan awalba xidid ahay, laakiin hadda waxaan ogaaday inaanan xidid sii ahayn, waxaan isku dayay inaan isticmaalo Codsiga mar labaad, iyo sidee Kuwo badan, waxaan arkayaa oo keliya badhan weyn oo guduud ah, marka lagu daro haddii aan dhagsiiyo, waxaan helayaa farriin aysan ku xirmi karin ma ogi meesha. Way fiicnayd intay socotay.
Ku jawaab Kamenizer
Waxaa lagu tijaabiyey QBEX QBA769, oo si sax ah u shaqeynaya. Aad u saaxiibtinimo.
Jawaab Jorge Coral
Waxaan arkaa daaqad yar oo leh hal badhan oo buluug ah oo waxay leedahay xididka sida 4 jeer, maxaa loola jeedaa?
Jawaab Rodrigo Caballero
Si guul leh ayaa loogu tijaabiyey Bogo QC in Framarootku ku guuldareystay; Waxaan helaa laba icons, mid ayaa aqriya Root, kan waxaan ku "qaboojiyay" Titaniun waxayna umuuqataa in fariimaha SU aysan sii muuqan shiinaha. Astaanta kale waa la qaboojin karaa ama la baabi'in karaa mise waa lagama maarmaan in la sii wado xididaynta?
Ku jawaab Siegfried
Waxaan u maleynayaa in qoraalkani horey u lahaa waqti, laakiin ma dhaawaceyso, weydii
Waxaan hayaa xperia t2 aaladda Ultra waxayna leedahay JB, laakiin waxaan u cusbooneysiiyay Kitkat 4.4.3.
Waad ku rujin kartaa apk-kan?
marwo waxaan helaa batoonka guduudka ah, waxaa jira barnaamij kale oo xididada mobile-kayga htc
Iyo haddii aan haysto Android 4.4 🙁
Waad salaaman tahay, waxaan rajaynayaa inaad si dhaqso leh iiga jawaabto kuwa badan, waxay ka shaqeysay s3 mini laakiin waxaan helay kaliya batoon midabkeedu yahay casaanka oo ma ahan midka casaanka, android-kayga ayaa ah midka dhaha waa la jaan qaadi karaa laakiin sababo jira awgood ma shaqeynayo iyo Weligay kuma xididaysan unugga si aan u aqbalin, maxaa sabab u ah?
Ku jawaab Elias Hernandez
Waa salaaman tahay Francisco Ruiz la Verdad Viejo, casharkaaga ayaa aad ii caawiyay !! Aad baad u mahadsantahay dhibaato ayaan ku qabay faylasha build.prop mana ogolaanin in xidid laga dhigo Laakiin mahadsanid casharkaaga xididki hore ayaa loo qabtay waana sixi karaa feylasha khaldanaa ka hor Mahadsanid odaygu daryeel iyo duco!
Ku jawaab Manrique Nerio
nooca taleefankayga waa 4.4.2
Ma u adeegi lahayd xididdada?
Waad salaaman tihiin, horeyba waan uhelay dhamaan tillaabooyinka, xitaa batoonka guduudka, laakiin markaan isku dayo inaan adeegsado arjiga shaashadda shaashadda waxay umuuqataa inaysan xidid ahayn, maxaan sameyn karaa
Ku jawaab Yveth
Fadlan ma u cusbooneysiin kartaa alcatel D1 wax badan ayey i caawin lahaayeen maxaa yeelay waa dhowaan ma heli karo wax aan ku xidido
Jawaab Edwin Lopez
Marka SuperSu la rakibo waxay ii sheegaysaa inaan cusbooneysiiyo labada nooc, laakiin mar hore ayay qaadatay nus saac. Maxaan sameeyaa
qof jawaabta u baahan dijo
Waa maxay sababta badhan dheer oo guduud ahi u muuqdo oo aanu u muuqan kan cas?
Mine waa huawei
Nooca Android 4.3
Ujawaab qof si deg deg ah jawaab uga helo
Ciise Mendez Ledezma dijo
Badhanka guduudku waa sababta oo ah qalabkaagu ma waafaqsana….
Jawab Ciise Mendez Ledezma
Waxaan hayaa mobiil shiinees ah oo wata android 4.1 codsiguna si fiican ayuu u shaqeeyaa, boostad aad u wanaagsan.
Ciise Manuel dijo
Waad salaaman tahay: Waxaan hayaa kiniin (gabadhayda runti), halkaas oo kaliya erayga "ANDROID" uu ka muuqdo. hadaad ka tagtana waa sidaa oo kale ilaa uu baterigu ka idlaado. Maxaa dhacaya.
Haddii qof ii jawaabo, aad baan u mahadcelin lahaa
Ku jawaab Jesús Manuel
Dadyahow waad salaaman tihiin, waxaan helaa badhanka weyn ee midabka guduudan moobiilkeyguna waa SGS3 oo ah nooca loo yaqaan 'android jelly bean 4.3' waxaan ula jeedaa inaan noqdo nooc la jaan qaadi kara sida ku xusan barnaamijka marka hadii midkiina xalka og ama meesha wax ka helo, ii soo sheeg pls pls my gmail adiga waa halkaan ayaan ku joojinayaa ^^ borjalb98@gmail.com
hello, ma taqaanaa sida loogu wareejiyo barnaamijyada 32gb sd iyadoon loo baahnayn xidid? Waxaan isku dayay kumanaan barnaamij laakiin ma shaqeeyaan. Oo hadday lagama maarmaan ahayd in xididdada la noqdo ka dib, sidee baan ugu wareejiyaa barnaamijyada sd? Mahadsanid
Jawaab 12085151mlili +
waad ku rujin kartaa lg g3 dabcan codsigan
abraham yar dijo
Qoraalkeyga 's4' ma shaqeynayo waxaan helayaa hal badhan oo midabkiisu yahay guduud oo caawiya
Ujawaab junior abraham
Waa salaaman tahay Francisco, ma heli karo robot ii shaqeeya aniga oo leh fnac 10 tabletkeyga 🙁
Ma ogtahay wax i caawin kara? Mahadsanid.
Waa salaaman tahay, qofna ma garanayaa in Bisadda B15 lagu xididayn karo habkan? Anigu kama heli karo macluumaad ku saabsan terminalkan internetka oo waxaa ku raran dalabyo badan oo kaliya qaadaya boosaska.
Ku jawaab Eliet
WAA LAGU QAADAN KARAA CEL EXPERIA ZL C6502 resp.
Aynu nidhaahno Marka si dhammaystiran loo jaro, .. laakiin maxaa dhacaya haddii goor dambe oo aan doonayo inaan dib ugu bilaabo taleefankayga qaabka warshadda, suurtagal ma tahay? ma sii wadi doontaa in la jabiyo mise qaabeyntaas ayaa baaba'aysa
Haddii aad dib u dejiso, dib u dejinta ayaa weli ah; sida cusub oo kale, waa inaad mar kale xidid siisaa.
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan hayaa galaxy trend lite GT S7390L, kaliya waxaan fuliyay howsha oo dhan mana shaqeynin, waxaan u maleynayaa, talaabada ugu dambeysa kamay soo bixin sida kor ku xusan, nooca android waa 4.1.2, iyo at dhamaadka waxaan helayaa shaashad kale oo leh hal badhan oo midab guduudan ah oo aan rakibin supersu ama wax la mid ah, fadlan ka caawi shakiga, mahadsanid: P.
Waa salaaman tahay Francisco su'aashaydu waxay tahay tan soo socota waxaan haystaa LG 7X oo wata android 4.4..2 waa la rujin karaa?
xidiggayga samsung galaxi ee GT-S5282 xidid ma noqon karaa?
Jawaab juan sebastian gaviria
Ciise c dijo
Waxay ku habboon tahay motorola moto e oo leh nooc Android ah 4.4.4 Waxaan sugayaa jawaabtaada
Jawaab ciise c
Jawaab Johan sebastian
Guduud waa casaan ama guduud
Samsun S3, waxaan raacay tillaabooyinka aakhirkiina waxaan arkayaa oo keliya badhan guduud ah, oo aan ahayn mid guduudan iyo mid casaan ah, waan hubiyey bal inuu xididaysan yahay oo aanu shaqaynayn. xoogaa caawimaad ah?
Waxaan si joogto ah ula socdaa sayidka xididka iyo markaan daarayo waraaqaha Shiinaha
ciise garcia dijo
Waxaan horey isugu dayay 5 jeer on my s3 mini oo markaan dhameeyay daaqad kale ayaa soo muuqatay lamana saarayo, waxaan xiray xididkii xididka oo waxaan galay hubiyaha xididka waxayna ii sheegaysaa inaysan xidid ahayn
Jawaab ciise garcia
Maxaan sameeyaa si aan u rujiyo S Galaxy Young
Subax wanaagsan, kiniin Samsung galaxy tab-2 10.1 xidid dhibaato la'aan. Android 4.2.2 Aad baad u mahadsantahay
Xiriiriyaha soo dejinta sayidka xididku waa dabin dhimasho
Miyuu ka shaqeeyaa samsung galaxy s4 mini 4.4.2?
Ku jawaab Luis sergio
In xididka sayidka xiriiri khiyaano saafi ah
Waxay ku rakibtaa qalabka taleefanka oo ma leh sanka laga tirtiro.
Mahadsanid nin, aad baad u mahadsan tahay….
Ujawaab Christian Perez Perera
Sida loo xidido kiniin SuperSonic SC-91JB
Ku jawaab carlosparrales
Waad salaaman tahay, waxaan isku dayay rogaal celiyaha natiijada waxay la mid tahay kingrot, waa wax aan faa'iido lahayn, waxaan ku tijaabiyay galax s4 oo leh android 4.4.2, iyo Huawei oo leh mui 3.0, mana shaqeynayo midna, fadlan, kahor wax dhigashada, hubi aaladaha ay ku habboon tahay, waxaan ku adkaynayaa aragtidayda in sida kaliya ee lagu wareejiyo moobiilku yahay mid dhaqameedka loo maro kombuyuutarka, wax kastoo ay ku sheegaan faallooyinka bogagga internet-ka ee fara badan iyo kaladuwan, ma haysto awoodin in aan waligood wareejin mobile kasta oo leh apk lagu rakibay aaladda, had iyo jeer waxay soo martay pc-ga, qofkastoo wax helayna wuxuu ii sheegayaa sida ay u sameeyeen iyo nooca mobilada, moodeelka iyo nooca android, waxaan rajeynayaa xalka , Ma lihi waan ku guuleystey ...
mobiilkeygu waa alps s850c mana jirto wado lagu xidido karo Waxaan isku dayey dhamaan qaababka jira waxna ma jiraan —- HELP
Ku jawaab ecastan
Sida loo wareejiyo kiniinka
Ku jawaab joseantonio
Wuxuu ku shaqeeyaa alcatel one touch 4033A
Ku jawaab Maria Eugenia Hernandez
WAA MAXAY S3 LTE?
Ku jawaab alan alonso
Angel diirka dijo
ku socota ROPA08, halka loo yaqaan 'funker s454' iyo 'bravus 950 tablet', samnsumg s2, oo aadan garan karin ama aadan ogaan karin macnaheedu maaha in dadka kale aysan qabin, wax fikrad ah kama lihi cilmiga kombuyuutarka, taleefanka iyo waxaan ku guuleystay waxyaabo badan, inaad adigu ma yeeli kartaa waxay noqon kartaa inaadan si fiican u qaban, kor waxaan ku aqriyay mid aan kala saari karin casaanka iyo guduudka ... dhakhtarka indhaha ayaa ah ikhtiyaar.
Waxaan hayaa Samsung S2 oo leh Loolypop 5.1.1. Waxay u egtahay tallaal, batterigeygu wuxuu soconayaa inta u dhexeysa 16 iyo 22 saacadood celcelis ahaan, isagoo siinaya culeys.
Waana mahad dhamaanteed dadkan u shaqeeya dadka caajiska ah ee aniga oo kale ah ee ka faa'iideysta shaqadooda.
WAAD MAHADSAN TAHAY CUNKAAS, DADKA GANACSATADA XOR AH.
Ku jawaab Angel Perez
Ma shaqeynayo, shaashadda ugu dambeysa ee Root Master ma muuqato mid kalena wuxuu ka muuqanayaa Samsung Galaxy S4 I9500.
Jawaab Edison J. Romo R.
Waad salaaman tahay sxb, ka tag app rakibay tirtirkiisuna xididka ayuu saaraa, ma taqaanaa sidaan u samayn karo si aan uga saaro asigoon xididka ka saarin Waxa dhacaya waa inay la mid tahay super laakiin Shiinaha oo aanan garanayn haddii la beddeli karo ama haddii uu jiro nooc Ingiriisi ah ay ka fiicnaan lahayd. Fadlan caawi. Waxay ii shaqeysay xperia s laakiin ma doonayo barnaamijkaas mana ogi haddii ay jirto wado lagu tirtiro iyada oo aan saameyn ku yeelan xididka
Ma soo dagsado barnaamijka fucking
Ku jawaab Luiz
Aad baad u mahadsan tihiin, macluumaad aad u wanaagsan, waxaan awooday inaan si dhakhso leh u rujiyo kiniinkayga AIKUM AT792HC.
Ku jawaab chilis
Ma rujin karo samsung galaxy tab 3 (smt210) waa android 4.4.2.
Codsi noocee ah ayaan isticmaali karaa ???
Fadlan waxaan ubaahanahay inaan jabsado ciyaar hadaad adigana iga caawiso inaan jabsado kulankaan oo ah: AVATAR MUSIK waxaad kala soo dagi kartaa dukaanka ciyaarta ☺.
Fadlan taasi miyay ku jirtay taleefankayga gacanta ee jabsiga ah laakiin midkoodna ima tarin aniga? .
Marka caawimaad fadlan waan ku baryayaa ...?
Jawaab Crisgame: 3
SALAAMO ASXAABTA AAN RABO IN AAN KU WEYDIIYO HADII AAD II SHEEGI KARTID SIDA LOOGU SAMEEYO SAMSUNG GALAXI TRED LITE
Waa maxay astaanta Root Master? Sababtoo ah qaar badan baa ii muuqda
Jawaab Agoos Campos
Waa salaaman tahay Frank, habeen wanaagsan waxaan kaliya rajaynayaa inaad i caawin karto ... ninkaygu wuu i akhriyaa dhammaan fariimadayda wuxuuna ka sii daayaa qalab kale ama pc, wax walba waxay muujinayaan inuu leeyahay xidid ama wax sidaa darteed wuxuu i daawadaa sida aan uga saari karo taas iyo taas Mar dambe ma heysan karo taleefankayga gacanta fadlan i caawi tani waa wax welwel leh ... waad ku mahadsan tahay inaad fiicantahay
Ku jawaab anny
beddel taleefankaaga gacanta oo guur
Jawaab san pateste
1234aad doobtay dijo
midkoodna barnaamijyadan waxtar ma leh! (waxay kaliya dhibayaan)
hi francisco fiiri waxaan hayaa samsung galaxy grand prime sm-g531f x fadlan ma i caawin kartaa sideen ugu rujin karaa x
Waxaan u helay taas inaan soo dejiyo waa inaan dhigaa taleefankayga mana doonayo mana haddii kale markaa ma ii oggolaaneyso inaan soo dejiyo !!! Maxaan sameeyaa
Ma jirto waddo aan xidid ugu noqon karo Samsung Galaxy Trend 2 Lite..Waxaan isku dayay ku dhowaad kun siyaabood oo waxba ma jiraan..haddii qof igu yidhaa halkaas tag oo aan dhunkado
Bannaanka Dayan dijo
Waa hagaag markan waxaan jeclaanlahaa inaan kaa codsado caawimaad maadaama aan xididada u noqon karo Samsung S7 aniga oo aan isticmaalin pc-kayga S7 waa Android 7.0 aniguna waxaan isku dayay xidid dhawr ah laakiin kuma caawin karo fadlan waad ku mahadsan tahay horay ...
Ku jawaab Dayan Llanos
Waxaan haystaa Huawei Y6 II oo leh adroid 6.0, sidoo kale waxaan isku dayay habab dhowr ah waxayna ii sheegeen inay aad u adag tahay xidid
Waad salaaman tahay, lg x max-kayga lama rogo sidee baanse u yeeli karaa?
Jawaab Alejandro coila
Loogu talagalay p8 Lite?